Ngubani othumela i-sexting I-Foundation Foundation-Uthando, u-Sex kunye ne-Intanethi
Ikhaya Umthetho Ngubani othumela i-sexting?
Ukuthunyelwa kwe-Sexting, selfie, ukulungiswa kunye noononophelo baxhamla kunye kunye kwiwebhu edibeneyo. Ukuthumela ama-selfie e-sexy yinxalenye evamile ye-teknoloji eyenziwa yinto yokudlala ngothando phakathi kwabaselula namhlanje, kodwa kunokukhokelela ekubeni kuxelwe kumapolisa kwaye bafake kwi-database yabo.
Amantombazana athatyathwa kakhulu yintsika ehloniphekileyo yokukhuthaza umculo kunye nabasetyhini bembethe, bembethe izicathulo zesigqila kunye nokuzithobela ngendlela yokuziphatha ngokwesondo. Amadoda ngokwahlukileyo agqoke kwiingubo eziqhelekileyo ezimileyo kwi-pos of dominance. Uninzi lwababhinqa beentombi kunye neenkwenkwezi zoononopopasho nazo iiwebhusayithi zazo.
Ukusebenzisa ii-smartphones zabo, abafazi abaninzi abaselula baxelisa le mizobo ye-sexy kwaye bayithumele kwiintombi eziza kuba nethemba lokubamba umdla. Amakhwenkwe abuye athumele imifanekiso ye-naked 'yesithsaba' kwithemba lokumangalisa amantombazana.
Uphononongo lwengxelo ukuba abaninzi abafana bacela, okanye baqine, abafazi abaselula ukuba bathumele ezo zithombe. Kwixesha elidlulileyo ibhinqa liye latshintsha playboy amaphephancwadi, umkhanyo namhlanje ukutshintsha izithombe zabantwana abantombazana abantombazana, ngokukodwa kwabo bahlala esikolweni.
ezinye abaselula ngokuqinisekileyo uye wagwetywa ukuba 'unobuncwane obunobunono bezingane' ngenxa yokubamba izithandwa ezithandwa ngumntu osuka kwintombazana engaphantsi. Nangona kunjalo uninzi lweenkolelo madoda a badala. La madoda angama-adult atholakale ahlala njengamadoda amancinci kwaye akhuthaze amantombazana ukuba abathumelele okanye bangenanto. Bahlala bebenza nabo kumagumbi okuxoxa kunye nakwiiwebhusayithi ezithandanayo nethemba lokwakha ithemba elaneleyo kunye nobudlelwane obusondelene nabo ukuba bahlangane baze balalane nabo ngaphandle kwemvume yabazali. Kwiimeko ezimbi nakakhulu, zibagcoba ngenjongo yokubamba.
Izicwangciso zokucoca ziquka ukucebisa ulwazi lomntu siqu kumntu omncinci abasebenzisa ngokubhekiselele kubo, besongela ngokubhenela kubazali babo ngaphandle kokuba bavumelane nokudibana nabo ngesini.
Uphando olwenziwe ngabantwana abancinci bezesondo lubonisa ukuba la madoda amadala ahlala enezinto ezibizwa ngokuthi "ukuphazamiseka kwengcamango." Yiloo nto abayiphikayo ngokunyaniseka kweendlela zabo zokuziphatha okanye bafuna ukugxeka umntwana ukuba afune ukudala kwaye ngenxa yoko uyashukumisa.
<< Ukuthumela imiyalezo ngefowuni phantsi komthetho waseNgilani, iWales kunye neNI Ukuziphindezela kwi-Porn >>